Iikhosi ze-50 zeHarvard zasimahla ezikwi-Intanethi zaBafundi
Iikhosi ezingama-50 zeHarvard zasimahla ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi
Kule nqaku, unokufumana iinkcukacha ezipheleleyo zeekhosi zasimahla zeHarvard ezikwi-intanethi ezivulelekileyo kubafundi, abasebenza ngokukhululekileyo, abasebenzi, oochwephesha, kunye nawo wonke umfundi kwi-intanethi.
Ukufumana ulwazi kwezinye iindawo zokufunda okanye ukuphucula indawo yakho yokufunda kuyakhuthazwa ngokuthatha iikhosi ezikwi-Intanethi njengoko zikhawuleza ukugqitywa, zilungele kwaye kwiimeko ezininzi azizukuchaphazela imisebenzi yakho yemihla ngemihla.
Eli nqaku libonelela ngeenkcukacha ezipheleleyo kwizifundo zasimahla ezikwi-Intanethi ezibonelelwa yiYunivesithi yaseHarvard ukuba abafundi kunye nawo wonke umntu afake isicelo, awuyi kuhlawula ngokufunda ezi zifundo kwaye uya kufundiswa ngoonjingalwazi baseHarvard kuloo ndawo yesifundo.
Ukusukela kwixesha lokuvalwa kwelizwe kuqale kumazwe amaninzi ngenxa yobhubhani we-Covid-19, abantu abaninzi bakhukulise i-intanethi bekhangela iikhosi ze-intanethi abanokuthi bathathe inxaxheba kuzo. Uninzi lwezifundo zasimahla kunye nezihlawulelwayo kwi-Intanethi zirekhode ukunyuka kwenani labathathi-nxaxheba.
Ukufunda kwi-Intanethi kutsale ingqalelo enkulu kangangokuba siye sakwazi ukufumanisa ukuba zikho iikholeji ze-intanethi ezihlawula nabafundi ukuthatha inxaxheba kwiinkqubo zabo endaweni yezinye iindlela.
Ngotshintsho lwequbuliso kwiimfuno zabafundi, senze izikhokelo zamanqaku kwiikhosi ezahlukeneyo ze-Intanethi ezinokuthi zithathe inxaxheba kubafundi. ezona zifundo zisimahla kwi-Intanethi eCanada Kwaye ndacacisa inani lasimahla iikhosi ezikwi-Intanethi ezinxulumene nesoftware yedijithali kunye nekhompyuter izifundo.
Sibhale inqaku elidwelise Iwebhusayithi ezilishumi eziphezulu zasimahla kunye namaqonga ezifundo ze-Intanethi inani lezifundo zasimahla ezikwi-Intanethi ezinezatifikethi zokugqitywa.
IHarvard lelinye lawona amaziko aziwa kakhulu kwihlabathi liphela, ahlonitshwa kakhulu kwaye avelise abantu abaninzi abadumileyo abaye benza igalelo elihle kuluntu nakwihlabathi liphela.
Njengokuba kukho iikhosi zasimahla kwi-Intanethi ezibonelelwa yiYunivesithi yaseHarvard, kukwakho nezinye iiyunivesithi zamanye amazwe ezibonelela ngezifundo ezikwi-Intanethi ngalo mzuzu. Sithethile ngezinye Izifundo zasimahla kunye nezihlawulwa kwi-Intanethi ezinikezelwa yiYunivesithi yaseToronto.
Iinyani malunga neYunivesithi yaseHarvard
Malunga nekhosi yaseHarvard yasimahla kwi-Intanethi
IiNkalo zeZifundo zeHarvard zasimahla kwi-Intanethi
Ngaba iHarvard inezifundo zasimahla ezikwi-Intanethi?
Ngaba ndingasifumana isidanga seHarvard kwi-Intanethi?
Ndingasifumana njani isatifikethi sasimahla eHarvard?
Ngaba iHarvard SIMAHLA?
Iikhosi ze-50 zaseHarvard zeDyunivesithi zasimahla ezikwiSatifikethi
Intshayelelo kuBantu beDijithali
Intshayelelo kubuchwephesha bobugcisa kunye nePython
Umthetho woTywala: Ukusuka kwiTrust ukuya kuVumelwano kwiKontrakthi
Imigaqo, iSitatistiki kunye nezixhobo zeKhompyuter zeNzululwazi eVuselelekayo.
Iziphumo zeMpilo yoTshintsho lweMozulu
Ukusebenzisa iPython yoPhando
Ukuphucula impilo yeHlabathi: Ukugxila kumgangatho nokhuseleko
Inzululwazi yeKhompyuter yamaGqwetha
Ukukhuselwa kwabantwana: Amalungelo aBantwana kwithiyori kunye nokuziqhelanisa
Intshayelelo kuPhuhliso lweMidlalo
Unqulo lweZakhiwo: Iinkcubeko kunye neZibhalo
Isingeniso kwiSayensi yeNkcukacha
Isoftware yoPhuculo lweApple kunye neReact Native
Intshayelelo kwiAccounting Accounting nakwiNkcazo zeMali
Inkolo, ungquzulwano noxolo
Inzululwazi yeDatha: Uxinzelelo lweMigca
Idatha yeNzululwazi: UkuFunda ngomatshini
Inzululwazi yeDatha: Ukubonwa kwezinto
Inzululwazi yeDatha: Ilitye lentloko
Inzululwazi yeDatha: kunokwenzeka
ISayensi Yeenkcukacha: R Isiseko
Inzululwazi yeDatha: Ukuthathelwa ingqalelo kunye neModeli
Inzululwazi yeDatha: Izixhobo zoMveliso
Inzululwazi yeDatha: Ukuphikisana
Isingeniso kwiModear Linear kunye neMatrix Algebra
Ukomeleza iiNkqubo zaBasebenzi bezeMpilo
I-Bioethics: Umthetho, amayeza, kunye ne-Ethics yeTekhnoloji yokuzala kunye ne-Ethics
I-Rhetoric: Ubugcisa bokubhala ngokuKhokelela kunye nokuThetha esiDlangalaleni
Isiseko seNeuroscience, Icandelo 1
Isiseko seNeuroscience, Icandelo 2
Isiseko seNeuroscience, Icandelo 3
I-Opioid Crisis eMelika
Isingeniso kwiNtsebenziswano yeNtsapho kwiMfundo
IidolophuX: elidlulileyo, elangoku kunye nekamva lobomi basezidolophini
Iincwadi zaseJapan: Ukusuka kwi-Manuscript ukuya kwiPrinta
Ukungenisa umoya kwimitshini yeCovid-19
Ummiselo kagqirha wamachiza, indleko kunye nokufikelela
UbuBuddha NgeZibhalo Zaso
UbuYuda ngeZibhalo zayo
Inzululwazi kunye nokuPheka: Ukusuka kwi-Haute Cuisine ukuya kwi-Soft Matter
Ubomi kunye noMsebenzi kaShakespeare
I-MalariaX: Ukoyisa iMalariya ukusuka kwiGenesis ukuya kwiGlobe
Isiphelo kwiikhosi zeHarvard zasimahla kwi-Intanethi
Eyasungulwa ngo-1636 kwaye ikhona eCambridge, eMassachusetts, kwiYunivesithi yaseHarvard iyunivesithi yangasese ye-Ivy League yophando ebizwa ngokuba ngumnikeli wayo, uJohn Harvard. Njengeyona yunivesithi indala eMelika, inembali eninzi, ifuthe lehlabathi, ubutyebi kunye nodumo lwezifundo olwenza ukuba ibe yenye yezona yunivesithi zidumileyo ehlabathini.
IYunivesithi yaseHarvard sele inikezela ngemfundo esemgangathweni kwaye ivelisa abagqwesileyo abagqwesileyo, kubandakanya abongameli abasi-8 base-US, iintloko zamazwe angaphandle ezingama-30, njl.njl. Abaphumelele kwiDyunivesithi yaseHarvard baziwa kakhulu ngabasebenzi kwaye bahlala bephambili kukhuphiswano lwabasebenzi.
IYunivesithi izinikele ekugqweseni ekufundiseni, ekufundeni, kuphando kunye nasekuphuhliseni iinkokeli kwiinkalo ezininzi ezenza umahluko kwihlabathi liphela.
Iikhosi zasimahla zase-Harvard zeyunivesithi ezikwi-Intanethi azidingi lukhulu kuwe ukuba ube yinxalenye, yonke into oyifunayo yikhompyuter / ilaptop, uqhagamshelo lwe-intanethi kunye nokuzimisela kwakho. Unokufundisisa naziphi na iikhosi ezikummandla wakho onomdla ukuze ube ngcono, ukomeleza izakhono zakho okanye unokukhetha ikhosi yokufumana ulwazi ngakumbi.
Lilonke, ukugqiba naziphi na iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zeHarvard kuya kunceda ukukhulisa ulwazi lwakho kunye nezakhono, kukunyusele kwileli yokufunda, nangaphambi komntu okhuphisana naye.
Ukwazisa i-CV yakho kumqeshwa wakho ebonisa ukuba ugqibile ikhosi ekwi-Intanethi evela eHarvard kuya kukunceda ekufumaneni imisebenzi phambi kwabanye ingakumbi ukuba ufunda kwaye ugqibezele ngaphezulu kwekhosi enye kwicandelo lakho.
Sinesikhokelo malunga Izifundo ezingama-30 zobuchwephesha kwi-intanethi ezinezatifikethi nawe ungathatha inxaxheba. Nazo ziya kuba negalelo ekwenzeni iCV yakho igqame.
Kukwakho nenani elinjalo izifundo zeCanada ungabhalisela.
Kukho iikhosi ezingama-90 ezifumaneka simahla kwi-Intanethi ngeyunivesithi yaseHarvard kwaye zonke zizenzekelayo, zibanzi kwaye zichanekile. Zonke zinikezelwa ngolwimi lwesiNgesi kwaye kukho izatifikethi ezikhoyo ukugqitywa kwazo naziphi na izifundo.
Nangona kukho izatifikethi ezifumanekayo kuzo zonke iikhosi zasimahla ezibonelelweyo, ezi zatifikethi ziza nentlawulo. Ewe, ungakhathazeki, umrhumo wokufumana isatifikethi sokugqitywa kwayo nayiphi na iikhosi zasimahla zasimahla kwi-Intanethi zaseHarvard zincinci, zingaphantsi kwe- $ 200.
Zonke iikhosi ezikhoyo zineeveki nje ezimbalwa kwaye azithathi xesha lide ukuzigqiba, ezinye zazo zingaphantsi kweeyure ezingama-48 xa zizonke. Awugunyaziswanga ukuba uye nini okanye nini xa ungaqhubekeki nezifundo xa sele uqalile, zonke zizenzekile. Olu bhetyebhetye lwenza kube lula ukugqibezela.
Iikhosi zasimahla zeHarvard kwi-Intanethi zabafundi ziphantsi kwezi nkalo zezifundo zilandelayo;
Imfundo & Ukufundisa
Kubafundi abathanda ubugcisa okanye abafundi ngoku abakhangela izikolo ezilungileyo zokufumana isidanga sokuqala kuyo nayiphi na ikhosi enxulumene nobugcisa, senze uluhlu ezona zikolo zibalaseleyo ehlabathini onokukhetha kuzo.
Emva kophando oluninzi, ndikwazile ukuza nezifundo zasimahla ze-50 eHarvard ezikwi-intanethi eziphantsi kwezi ndawo ndizikhankanyileyo ngasentla, ngaphandle kokuqhubeka, ndiza kudwelisa ezi zifundo.
Ewe. IHarvard inezifundo ezininzi zasimahla kwi-Intanethi, ezimalunga nama-90 zazo kwaye sibonise malunga ne-50 yazo kweli nqaku kunye nezixhobo zazo zonxibelelwano.
Ewe ungasifumana isidanga seHarvard kwi-intanethi. Kuya kufuneka uyazi nokuba izatifikethi ezifumaneke ekugqityweni kwazo naziphi na zezi zifundo zasimahla kwiHarvard ezikwi-Intanethi asizizo iziqinisekiso zemfundo endaweni yoko, zizatifikethi zokugqitywa kwezifundo.
Ukufumana isidanga kwiYunivesithi yaseHarvard kwi-intanethi, kuya kufuneka uthathe inkqubo ye-intanethi eyunivesithi kwaye uyigqibe. Ungajonga isikhokelo esibhale kuso ISikolo seShishini saseHarvard kwi-Intanethi.
Andiqinisekanga ukuba kunokwenzeka ukuba ufumane isatifikethi sasimahla esivela kwiyunivesithi yaseHarvard kodwa ungafumana isatifikethi esivela eHarvard ngexabiso elincitshisiweyo ukugqitywa kwazo naziphi na izifundo zabo zasimahla ezikwi-Intanethi.
Hayi, iyunivesithi yaseHarvard ayikhululekanga kwaye ayikaze ibekho. Nangona iziko linenani elikhulu leenkqubo zokufunda kunye nezifundo ezininzi zasimahla kwi-Intanethi.
I-Bioethics: UMthetho, oNyango kunye neeNqobo ezisekuziphatheni zeTekhnoloji yokuzala kunye neeNqobo eziseSikweni
IziXeko zeZinto eziBonakalayoX: edlulileyo, yangoku kunye nekamva lobomi beedolophu
I-MalariaX: Ukoyisa iMalariya ukusuka kwiGenesis ukuya kwiGlobe.
Apha ngezantsi kukho iinkcukacha kunye nokunxibelelana kwezicelo zazo zonke iikhosi ezingama-50 zasimahla kwi-Intanethi ezidweliswe apha ngasentla.
Imigaqo ye-biochemistry yenye yeekhosi zasimahla zeHarvard ezikwi-intanethi zabafundi kwaye linqanaba lokwazisa elibonisa indlela i-biochemistry ehlola ngayo iimolekyuli zobomi, ukuqala kwiibhloko zokwakha ezilula kunye nokufikelela kwimetabolism entsonkothileyo.
Kule khosi, uya kufunda ukwakheka kunye nemisebenzi yeebhloko zokwakha zeekhemikhali zobomi, iindlela eziphambili ze-metabolic ezinamandla, iiseli, ukudityaniswa kweenkqubo ze-biochemical kwimeko yeeseli, izicwili kunye nezinto eziphilayo phakathi kwezinye ezinokuthi zisetyenziswe kunyango.
Emva kokugqitywa, unokusebenza kumaziko ezonyango nakumaziko ophando lwebhayoloji.
Ubude bexesha: Iiveki ezili-15 ubude
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-4-6 / iveki
Uhlalutyo lwedatha ePhakamileyo- yenye yeekhosi zasimahla zeHarvard ezikwi-intanethi ezixhobisa abafundi ngobuchule kunye nolwazi olusetyenziswa ngokubanzi kuhlalutyo lwedatha ephezulu.
Kule khosi, uya kufunda ukusabela kobukhulu, ukuncipha kwemathematics, uhlalutyo lwezinto, ubuninzi beendawo zokulinganisa, ukubola kwexabiso elinye kunye nenxalenye ephambili phakathi kwabanye. Emva kokugqiba le khosi unokusebenza neenkampani zobuchwephesha kunye nemibutho emikhulu ukuhlalutya nokulawula idatha yabo nakwicandelo lezonyango.
Ubude bexesha: Iiveki ezili-4 ubude
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-2-4 / iveki
Intshayelelo kuBantu abaDijithali yenye yeekhosi zasimahla zeHarvard ezikwi-intanethi ezijongana nokusebenzisa izixhobo zekhompyuter ukwenza uphando ngaphakathi koluntu.
Kule khosi, uya kufunda ukuba igama elithi "ubuntu bedijithali" lithetha ntoni kumacandelo ahlukeneyo, ukuba ungazisebenzisa njani izixhobo zasimahla ukwenza uhlalutyo lokubhaliweyo, ukuba zisebenza njani izixhobo zedijithali kunye neentlobo zeefayile ezisetyenziselwa ukwenza, ukuqokelela kunye nokucwangcisa idatha eza kuthi kukunceda uphuhlise ubuchule kunye nezakhono ezifunekayo kuphando lwedijithali kunye nokubonwa.
Ubude bexesha: Iiveki ezili-7 ubude
Intshayelelo kwiArtificial Intelligence kunye nePython yenye yeekhosi zasimahla zaseHarvard ezikwazisa abafundi kwiikhonsepthi kunye neealgorithms kwisiseko sobukrelekrele bale mihla bokufunda kunye nokufunda ngomatshini ePython.
Kule khosi, uya kufunda imigaqo-nkqubo yobukrelekrele bokwenza izinto (i-AI), indlela yokufaka i-AI kwiinkqubo zePython, funda ukuyila iinkqubo ezikrelekrele, ukufunda ngomatshini kunye nokukhangela kwigrafu abafundi abaza kwenza iiprojekthi kwezi ndawo zokufunda.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-10-30 / iveki
Umthetho wekhontrakthi: Ukusuka kwiTrust ukuya kwi-Promise ukuya kwiKhontrakthi yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezenzelwe ukufundisa abafundi kuluhlu lwemicimbi evelayo xa bengena kwaye benyanzelisa iikhontrakthi.
Kule khosi, uya kufunda ukuba ungazenza njani iikhontrakthi ngesibonelelo esamkelekileyo kunye nokwamkelwa, funda imvelaphi yethiyori yezivumelwano, iitrasti kunye nezithembiso, wazi amandla eqela lesithathu lokunyanzelisa iikhontrakthi kunye nemida yokunyanzelisa iikhontrakthi. Kwimisebenzi yethu yemihla ngemihla, senza iikhontrakthi ngandlela thile kwaye enye le khosi iya kukubonelela ngezakhono zokwenza iikhontrakthi ezifanelekileyo.
Ubude bexesha: Iiveki ezili-8 ubude
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-3-6 / iveki
Imigaqo, iStatistical and Computational Izixhobo zeNzululwazi eVuselelekayo yenye yeekhosi zasimahla zeHarvard ezikwi-Intanethi eziza kukuxhobisa ngezakhono kunye nezixhobo ezixhasa inzululwazi yedatha kunye nophando olwenziwayo ukuze uqiniseke ukuba ungazithemba iziphumo zakho zophando, uzivelise ngokwakho kwaye unxibelelane nabanye .
Kule khosi, uya kufunda izinto eziphambili zokuqinisekisa ukubonwa kwedatha kunye noyilo lokuvavanya kwakhona, izinto ezisisiseko kunye neendlela zamanani zohlalutyo lwedatha. Obu buchule buyafuneka kwiinkampani ezinkulu zobuchwephesha kunye nedatha okanye amashishini ukuze asebenze njengabahlalutyi beenkcukacha kunye nabaphathi.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-3-8 / iveki
Iziphumo zezeMpilo kuTshintsho lweMozulu yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zaseHarvard apho uya kufunda ngeziphumo zokufudumala kwehlabathi kwimpilo yabantu kunye nendlela ezinokulawulwa ngayo.
Ikhosi inokubonakala ngathi iyahlekisa kodwa yinto ebalulekileyo kwimpilo yabantu kunye nokhuseleko uninzi lwabantu olungakhangeli kuyo. Ubushushu behlabathi buchaphazela kakhulu ubomi babantu kwaye ngenxa yezakhono zakho kule khosi ungasoloko ujonge ezi ziphumo, ezimbi kakhulu, kunye nendlela yokuyinqanda.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-3-5 / iveki
Sebenzisa iPython yoPhando yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zaseHarvard apho uya kufunda ukuba ungayisebenzisa kanjani iPython, ulwimi lwenkqubo, ukwenza uphando kunye nokufezekisa iziphumo ezilungileyo.
Uya kufunda uhlobo lwezixhobo zePython zokwenza uphando kunye nendlela yokusebenzisa ezi zixhobo ngeenjongo zophando kunye nophononongo olusisiseko lwePython 3 yenkqubo. Izakhono zakho zinokusetyenziswa kwinkampani ye-high-tech, ishishini kunye nezinye iindlela zophando.
Ubude bexesha: Iiveki ezili-5 ubude
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-4-8 / iveki
Ukuphucula iMpilo yeHlabathi: Ukujonga uMgangatho kunye noKhuseleko yenye yeekhosi zasimahla zeHarvard kwi-intanethi apho uya kufunda khona amanyathelo afanelekileyo okuphucula impilo ngokubanzi, mhlawumbi kukutya okanye ezinye izinto ezichaphazela ubomi.
Kule khosi, uya kufunda izixhobo kwaye ufumane ulwazi lokuphucula umgangatho ohanjisiweyo kwinkqubo yezempilo, iindlela zamanyathelo okumgangatho phakathi kwabanye. Izakhono ezinje ngezi ziluncedo kwicandelo lezempilo kungoko unokusebenza esibhedlele okanye nakweliphi na iziko lonyango nakwisebe lezempilo lombutho.
Inzululwazi yeKhompyuter yamaGqwetha yenye yeekhosi zasimahla zeHarvard ezikwi-Intanethi ezilungiselelwe ngokukodwa abafundi bezomthetho ukuba bafumane ulwazi kwisayensi yekhompyuter.
Kule khosi, uya kufunda imiceli mngeni kwimpambano yomthetho kunye netekhnoloji, inkqubo, i-cryptography, ukhuseleko lwe-cyber, izakhiwo zedatha kunye nealgorithms. Oku kunokufakwa kufundo lwakho oluphambili njengegqwetha kwaye ufumane ulwazi olwahlukileyo kwikhompyuter.
Ubude bexesha: Iiveki ezili-10 ubude
Ukukhuselwa kwabantwana: Amalungelo abantwana kwiTheyori kunye nokuziQhelanisa yenye yeekhosi zasimahla zeHarvard ezikwi-Intanethi ngokubhekisele ekukhuseleni abantwana kuzo zonke iintlobo zobundlobongela, ukuxhaphaza ngomthetho.
Kule khosi, uya kufunda indlela yokuhlalutya imiba yokhuseleko lwabantwana, indlela yokuvavanya kunye nokomeleza inkqubo yokhuselo lomntwana kunye nazo zonke izakhono ezichaphazela ukhuseleko lomntwana ohamba nakuyiphi na indlela yokuxhatshazwa.
Ubude bexesha: Iiveki ezili-11 ubude
Intshayelelo kuPhuhliso loMdlalo yenye yeekhosi zasimahla zeHarvard ezikwi-intanethi ezixhobisa abafundi ngezakhono ezisisiseko zoyilo lomdlalo kunye nophuhliso. Kule khosi, abafundi baya kufunda ukukhula kwe-2D kunye ne-3D imidlalo yokudibana kwaye baphonononge uyilo lwemidlalo ethandwa kakhulu.
Ubude bexesha: Iiveki ezili-12 ubude
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-6-9 / iveki
Inkolo yokuFunda nokuBhala: Inkcubeko kunye neZibhalo yenye yeekhosi zasimahla zeHarvard ezikwi-Intanethi ezifundisa abafundi ukuba baziqonde ngcono iindlela ezityebileyo nezintsonkothileyo ezithi iinkonzo zisebenze kwimbali nakwimixholo yangoku.
Kule khosi, uya kufunda ukuba iinkolo zahluke njani ngaphakathi, ukuba inkolo iguquka njani kwaye iyatshintsha kwaye idityaniswa njani kuzo zonke iinkcubeko zobomi. Ekufundeni ikhosi uya kutyhilwa kwimbali kwaye uphonononge uninzi lomxholo woncwadi olunokukunceda njengombhali onomdla.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-5-10 / iveki
Intshayelelo kwiNzululwazi yeKhompyuter yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zeHarvard ezibonelela abafundi ngezakhono ezisisiseko zenzululwazi kunye neenkqubo zekhompyuter.
Kule khosi, uya kufunda kwaye ufumane ukuqonda nge-computer yesayensi kunye neprogram, ufunde ukucinga nge-algorithm kwaye usombulule iingxaki zeprogram ngokulula, uqhelane neelwimi zenkqubo.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-10-12 / iveki
Kule khosi, uya kungena nzulu kwinkqubo kwaye uqokelele ulwazi ngakumbi kwaye ube yingcali kwindawo yokufunda.
Ubude bexesha: Iiveki ezili-13 ubude
Intshayelelo kwiAccounting engenzi nzuzo kunye neeNkcazo zezeMali yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezibonelelwa yiHarvard ebonelela abafundi ngolwazi ngemigaqo esisiseko yokungaxhamli.
Akudingeki ukuba ubenalo naluphi na uhlobo lolwazi lobalo-mali okanye izakhono zokuthatha le khosi, iphathwa ziingcali eziya kuthi zichaphazele kakhulu ulwazi oluninzi kuwe.
* Yikhosi yewebhu yechungechunge
Inkolo, ungquzulwano noxolo yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezibonelelwa yiHarvard eziphonononga iindima ezintsonkothileyo nezihlukeneyo inkolo edlala kuzo zombini ukukhuthaza kunye nokunciphisa ubundlobongela.
Kule khosi uyakuchaza ukuba iinkolo zahluka njani ngaphakathi, kwaye iinkolo zitshintsha njani kwaye zitshintsha njani kwaye zingena njani kuzo zonke iinkcubeko zabantu.
Inzululwazi yeDatha. Ukulungiswa kwakhona kwakuphuhlisiwe ekuqaleni.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-1-2 / iveki
Inzululwazi yeDatha: Ukufunda ngomatshini yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zaseHarvard apho uya kufunda khona iziseko zokufunda ngomatshini, iindlela ezininzi zokufunda ngomatshini, indlela yokwakha inkqubo yengcebiso phakathi kwabanye.
Inzululwazi yeDatha: Ukubonwa yenye yeekhosi zasimahla zeHarvard ezikwi-intanethi eziza kukufundisa imigaqo-nkqubo yokubonwa kwedatha, funda indlela yokunxibelelana nokufunyanwa kwedatha kunye nendlela yokusebenzisa ggplot2 ukwenza iziza zesiko.
Inzululwazi yeDatha: ICapstone yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zaseHarvard apho uza kufunda khona ukuba ungasisebenzisa njani isiseko solwazi kunye nezakhono ezifundwe kuthotho ukusombulula ingxaki yokwenyani kunye nokusebenza ngokuzimeleyo kwiprojekthi yohlalutyo lwedatha.
Ubude bexesha: Iiveki ezili-2 ubude
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-15-20 / iveki
Inzululwazi yeDatha: Ukungenzeka yenye yeekhosi zasimahla zeHarvard kwi-Intanethi eziyimfuneko kwisazinzulu sedatha kwaye abafundi baya kufunda iikhonsepthi ezibalulekileyo kwithiyori enokwenzeka kubandakanya izinto eziguquguqukayo kunye nokuzimela phakathi kwezinye izihloko eziza kukwenza ube sisazinzulu sedatha esingcono.
Inzululwazi yeDatha: I-R Basics yenye yeekhosi zasimahla zeHarvard ezikwi-intanethi eziza kunceda abafundi ukuba bakhe isiseko kwi-R kwaye bafunde indlela yokuphikisana, ukuhlalutya kunye nokujonga idatha.
Kule khosi, abafundi baya kufunda i-syntax esisiseko ye-R, isiseko senkqubo R kunye nendlela yokwenza imisebenzi kwi-R kubandakanya ukuhlela, ukuphikisana kwedatha nokwenza iziza.
Inzululwazi yeDatha: Ukuthathelwa ingqalelo kunye neModeli yenye yeekhosi zasimahla zeHarvard ezikwi-intanethi eziza kukufundisa konke malunga nokuthotyelwa kunye nokwenza imodeli ezizezona zizixhobo ezisetyenziswa kakhulu kubalo kuhlalutyo lwedatha.
Kule khosi, abafundi baya kufunda indlela yokusebenzisa iimodeli ukudibanisa idatha evela kwimithombo eyahlukeneyo, iikhonsepthi eziyimfuneko ukuchaza uqikelelo kunye nemida yeempazamo zabemi, iiparameter, uqikelelo kunye neempazamo ezisemgangathweni ukwenza uqikelelo malunga nedatha.
Inzululwazi yeDatha: Izixhobo zokuvelisa yenye yeekhosi zasimahla ezinikezelwa yiHarvard eya kuthi ifundise abafundi izixhobo eziyimfuneko kunye nendlela yokusebenzisa ezi zixhobo ukuvelisa iziphumo ezifanelekileyo.
Inzululwazi yeDatha: Ukuphambanisa yenye ikhosi yasimahla enikezelwa yiHarvard ukuba abafundi bafunde indlela yokuqhubekeka kunye nokuguqula idatha eluhlaza ibe ziifomathi ezifunekayo kuhlalutyo.
Kule khosi uya kufunda ukukrola i-web, ukuphikisana usebenzisa i-dplyr, ukungenisa idatha kwi-R ukusuka kwiifomathi zeefayile ezahlukeneyo kunye nendlela yokusebenza nemihla kunye nexesha njengeefomathi zefayile kunye nokumbiwa kombhalo.
Intshayelelo kuThuba lokungenelela yenye yeekhosi zasimahla ezinikezelwa yiHarvard ukuba abafundi bafunde iseti yezixhobo kunye nezakhono kunye neendlela zokusebenzisa ezi zixhobo ukuhlalutya nokuqonda idatha, ukungaqiniseki kunye nokungahleliwe.
Le yikhosi yasimahla enikezelwa yiHarvard kubafundi ukuze bafumane ulwazi ngeenkqubo ze-R, isicelo sayo kwiimodeli ezinemigca kunye nendlela yokuhlalutya idatha kwisayensi yobomi.
Kule khosi, uya kufunda i-matrix algebra notation / imisebenzi, iimodeli ezinemigca kunye nesingeniso esifutshane sokubola kweQR.
Le yikhosi yasimahla enikezelwa yiHarvard kubafundi abafuna ukuba ngabasebenzi bezempilo, ikhosi ifundisa abafundi ukuba bahambise ukhathalelo lwempilo olusemgangathweni ophezulu olusezantsi kuluntu oludingayo.
Kule khosi, abafundi baya kufunda iikhonsepthi ezingundoqo kwimpilo yoluntu njengenxalenye yeenkqubo zempilo zokuqala kunye nendlela yokwakha umanyano lokuxhasa iinkqubo ezikhokelwa ngurhulumente.
Ubude bexesha: Iiveki ezili-6 ubude
Ukurhweba ngoqoqosho olusakhulayo yenye yeekhosi zasimahla ezinikezelwa yiHarvard ephonononga indlela oosomashishini kunye nezinto ezintsha ezihlangabezana ngayo nemicimbi entsonkothileyo kwezoqoqosho olusakhulayo.
Kule khosi, uya kufunda isikhokelo sokuqonda amathuba kunye, neengxaki zeshishini kunye nendlela yokuzisombulula kunye nokwenza ukuba uqaphele amathuba oshishino kwiimarike ezikhulayo ngokukhawuleza. Le khosi iya kukunceda ekubumbeni ube ngusomashishini ongcono.
I-Bioethics: Umthetho, amayeza kunye nokuziphatha kweTekhnoloji yokuzala kunye ne-Ethics yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zaseHarvard ezazisa abafundi kufundo lwe-bioethics kunye nokusetyenziswa kwengqiqo yomthetho kunye nokuziphatha.
Kule khosi, abafundi baya kufunda umthetho weenqobo ezisesikweni kunye nokuzimela, ukuba ishishini lobuchwephesha lokuzala lisebenza njani, kunye neziphumo zalo, bafunde nemiba yokuziphatha neyomthetho ephakanyiswe luluntu. Ukugqiba le khosi kuya kuvula ubuninzi bamathuba kumacandelo ezonyango nakwezomthetho.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-2-3 / iveki
I-Rhetoric: Ubugcisa bokubhala ngokuKhokelela kunye nokuthetha esidlangalaleni yenye yeekhosi zasimahla ezinikezelwa yiHarvard ukunceda abafundi ukuba baphucule indlela abacinga ngayo kunye nezakhono zokuthetha esidlangalaleni.
Le khosi iya kukubonelela ngezakhono kunye nolwazi lokusebenzisa izixhobo ezahlukeneyo zokubhala nokuthetha, ukwazi ukubhala uluvo oluchukumisayo lokuhlela kunye neentetho ezimfutshane, ikhosi iya kuphucula ngokulinganayo ubuchule bakho bokubhala kwaye ufunde ukuthetha ngokukuko naye wonke umntu.
Ubulungisa yenye yeekhosi zasimahla ezinikezelwa yiHarvard kwaye apha, abafundi baya kuxhotyiswa ngolwazi olusemva kwefilosofi yokuziphatha kunye nezopolitiko.
Ikhosi iya kukuveza kubulungisa bezentlalo kunye nobulungisa kulwaphulo-mthetho, ukuqonda okunzulu kwefilosofi kunye nokukwazi ukucacisa ngcono iimpikiswano zefilosofi kunye nemibuzo.
Isiseko seNeuroscience yenye yeekhosi zasimahla ezinikezelwa yiHarvard kwaye igubungela iinkalo ezintathu ezifundwa ngokwahlukileyo. Le yinxalenye yokwazisa nge-neuroscience evavanya iipropathi zombane ze-neuron. Uya kufunda iziseko ze-bioelectricity kunye nendlela umbane owenza ngayo ii-neurons kwingqondo.
Kule meko yesibini ye-neuroscience, uyakufumanisa ukuba i-neurons kwingqondo isebenza njani ukwenza iinethiwekhi ezintsonkothileyo.
Kule khosi, uya kufunda iziseko ze-synapses, indlela ii-neurons ezinxibelelana ngayo nabanye phakathi kwabanye.
Eli linqanaba lesithathu lekhosi, iNeuroscience kwaye kukuthatha ungene nzulu esifundweni. Apha, uya kufunda ukuba iimbono zemvakalelo zisebenza njani kwingqondo, i-anatomy esisiseko yeendawo ezisebenzayo zobuchopho, inkqubo ebonakalayo yengqondo phakathi kwabanye eya konyusa ulwazi lwakho lwe-neuroscience.
Le yikhosi yasimahla ekwi-Intanethi enikezelwa yiHarvard ephonononga imigaqo-siseko esisiseko yoyilo ngokufunda ezinye zezona zakhiwo zibalulekileyo kwimbali.
Kule khosi, i-Imagination ye-Architecture, uya kufunda ukufunda, ukuhlalutya, kunye nokuqonda iindlela ezahlukeneyo zobume bokwakha, imeko yezentlalo kunye nembali emva kwemisebenzi ephambili yoyilo kunye nemithetho-siseko esisiseko yokuvelisa eyakho imodeli yoyilo kunye nemizobo.
Ingxaki ye-Opioid eMelika yikhosi yasimahla ekwi-Intanethi enikezelwa yiHarvard eveza lonke ulwazi malunga neziyobisi ze-opioid kunye nendlela yokuphatha abaguli abachaphazelekayo.
Kule khosi, uya kufunda ngokusetyenziswa kwezonyango kunye nokungasetyenziswa kwezonyango ze-opioids kwaye uphonononge ezinye iziyobisi ezinzima, umngcipheko kunye neendlela zemithambo-luvo kweziyobisi ze-opioid kunye neendlela ezininzi zabantu aba ngamakhoboka eziyobisi.
Le yikhosi yasimahla ekwi-Intanethi enikezelwa yiHarvard kwaye iphonononga ukudityaniswa okuyimpumelelo phakathi kweentsapho kunye nootitshala kwaye kutheni kukhokelela kwiziphumo eziphuculweyo zabafundi nezikolo.
Kule khosi, intshayelelo yokuzibandakanya kusapho kwezemfundo, Uya kufunda ubudlelwane phakathi kokuzibandakanya kosapho kunye nokuphucula iziphumo zesikolo / zabafundi ukusuka ekuzalweni ukuya kwisikolo esiphakamileyo, izibonelelo ezongezelelekileyo eziziswa kobu buhlobo kootitshala, abazali kunye noluntu.
Le khosi yasimahla ekwi-Intanethi evela eHarvard inceda abafundi ukuba baqonde iimyuziyam, ezembali, ukuququzelela nokutolika ubugcisa, izinto zakudala kunye nomnqweno wesayensi.
Kule khosi, izinto ezibonakalayo, uya kufunda iindlela zokwenza umyuziyam kulwazi, ukucinga okucokisekileyo kunye nokuhlalutya izakhono, iziseko zohlalutyo lwembali kunye nokutolika kwaye wazi imisebenzi yeembali zembali, abaqokeleli kunye nabalondolozi.
Le khosi yasimahla ekwi-Intanethi enikezelwa yiHarvard iphonononga into eyenza ukuba izixeko zimangalise, zicel 'umngeni kwaye zinike amandla kunye nolwakhiwo olukhulu lwabantu.
Kule khosi, CitiesX: Ixesha elidlulileyo, elangoku kunye nekamva loBomi baseDolophini, uya kufunda ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlalutya umgaqo-nkqubo kawonke-wonke ezixekweni, igalelo lenkcubeko lezixeko kunye nefuthe labo kubantu, umbono wezembali ngokunyuka kwezixeko kulo lonke. Umhlaba.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-5-7 / iveki
Kule khosi yasimahla ekwi-Intanethi enikezelwa yiHarvard, abafundi baya kufunda ubugcisa bokuhamba baseJapan kokubini kwizicatshulwa ezibhaliweyo nezibonwayo.
Kule khosi, Iincwadi zaseJapan: Ukusuka kwiManuscript ukuya kuPrinta, uya kufunda indlela yokuvavanya iincwadi kunye nemisongo yaseJapan, iindlela ezahlukeneyo zokubopha, kunye neendlela ezahlukeneyo zokubalisa amabali.
Ubude bexesha: Iiveki ezili-9 ubude
IHarvard ibonelela ngezi zifundo zasimahla kwi-Intanethi kubafundi ababanika izakhono zokusebenzisa kunye nolwazi ngendlela yokusebenza, ukugcina izixhobo zokuphefumla ezincedisayo ekulweni ubhubhane oqhubekayo kunye nokusindisa ubomi.
Ubude bexesha: Iveki enye ubude
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezingama-2-5 / iveki
Kule khosi yasimahla ekwi-Intanethi enikezelwa yiHarvard, abafundi bafumana ulwazi ngendlela i-FDA elawula ngayo amayeza kunye nokuphonononga iingxoxo kwiindleko zamachiza amayeza, ukuthengisa kunye novavanyo.
Uya kufunda ezona mpikiswano ziphambili malunga nendlela amayeza amiselweyo aphuhliswa kwaye athengiswa ngayo, imbali, indima kunye nokubaluleka kwe-FDA kunye novavanyo lokhuseleko lwamachiza amiselweyo kusetyenziswa idatha yokwenyani.
Kule khosi yasimahla ekwi-intanethi, uya kufunda iinkolelo ezityebileyo kunye nezahlukeneyo kwizinto ezenziwa ngamaBuddha kwindawo nakwindawo, uphonononge ubuBuddha kwizibhalo zayo ngokunxulumene nangokwezifundo.
Le khosi yasimahla ekwi-Intanethi enikezelwa nguHarvard ifundisa abafundi iinkolelo eziphambili kunye nezenzo zobuJuda ngokukhangela kwizibhalo ezingcwele nokutolika kwabo.
Le khosi yasimahla ekwi-Intanethi ifundiswa ngabapheki kunye nabaphandi abaphezulu baseHarvard abaza kuphonononga indlela iindlela zokupheka zesintu kunye nezala maxesha ezinokuthi zikhanyise imigaqo-siseko esisiseko kwi-chemistry, kwi-physics nakubunjineli.
Kule khosi, iSayensi kunye nokuPheka: Ukusuka kwi-Haute Cuisine ukuya kwi-Soft Matter, uya kufunda ukusebenzisa ii-enzymes ukwenza ukutya, ukwazi ukucinga njengompheki kunye nososayensi.
Ubude bexesha: Iiveki ezili-16 ubude
Le khosi iphonononga ubomi kunye nemisebenzi yoncwadi kaWilliam Shakespeare, uya kufunda ngeendlela ezahlukeneyo kutoliko lwemibhalo ngemisebenzi yakhe kunye nendlela yokwenza imisebenzi yakhe kubugcisa banamhlanje.
Kule khosi yasimahla ekwi-Intanethi enikezelwa yiHarvard, abafundi baqala ukuphonononga inzululwazi kunye neetekhnoloji, imigaqo-nkqubo efunekayo ukulawula nokuphelisa isifo seengcongconi.
Kule khosi, uya kufunda ngebhayoloji yesifo seengcongconi, imiceli mngeni yokuphelisa isifo seengcongconi kwinkqubo yendalo, kunye neendlela zenzululwazi nezobuchwephesha zokuphelisa isifo seengcongconi.
Iikhosi zase-Harvard zasimahla ezikwi-Intanethi
Apho unazo iikhosi ezingama-50 zasimahla kwi-Intanethi ezibonelelwa yiHarvard kubafundi eziza kunceda ukwandisa iindawo zakho zobungcali, ukuphucula ubuchule bakho, kwaye kunokwenzeka ukuba zikumisele kwindlela entsha yomsebenzi.
Ezi zifundo zibonelelwa simahla kwi-Intanethi ngeyunivesithi yaseHarvard ngoku ziyaqhubeka kude kube nguSeptemba kwaye zinokuvulwa qho ngonyaka. Ungazibandakanya neli xesha, kwaye bayazenzela nto leyo ethetha ukuba xa ubhalisa ukuqala ikhosi, uya kufunda nanini na uthanda ngokuthanda kwakho.
Ezi zifundo, emva kokugqitywa, ziya kukuseta ngomsebenzi olungileyo njengoko abasebenzi becebisa kakhulu ngezakhono oza kuhlawulwa ngokufanelekileyo. Abantu abasebenzayo banokubhalisa kwaye bafunde ezi khosi nazo.
Ungasifaka kanjani isicelo seekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi eCanada ezineZatifikethi
Faka isicelo kwiSikolo soShishino saseHarvard kwi-Intanethi | Imali, Ukwamkelwa kunye neScholarship
Iikhosi ezikwi-Intanethi eSingapore ezineSatifikethi
Iikhosi zekhompyuter ezikwiSatifikethi
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zaBafikisayo kwi-13-19-yoNyaka-ubudala
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zaBafundi boPhuhliso lwaBasebenzi
Iikhosi zasimahla kwi-Intanethi ngeyunivesithi yaseHarvardIikhosi zase-Harvard zasimahla ezikwi-Intanethi
Post Previous:Iimfuno zeYunivesithi yaseConcordia | Imirhumo, iScholarship, iiNkqubo, iZikhundla
Okulandelayo Post:Iikhosi ezi-4 eziSimahla zeMasters kwiKhosi eneZatifikethi
Juni 30, 2022 kwi-11: 48
how can i register on the course? “biochemistry”
Meyi 25, 2021 kwi-7: 27
Ndingabhalisa njani kuqeqesho nceda? "Ukurhweba kuqoqosho oluKhulayo"
Meyi 28, 2021 kwi-5: 51
Cofa nje kwikhonkco elinikiweyo ukuze ubhalise.
NgoSeptemba 8, 2021 kwi-8: 03 pm
Nantsi ke… ..
Igqityelwe ukuhlaziywa ngeenyanga ezi-3 ngu UAdaeze Nwachukwu